THE CENTRAL သည် …………
* သာယာလှပသော အင်းလျားကန်၏ ညာဘက်ခြမ်း တည်ရှိခြင်း
* ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနှင့် ကန်ဘဲ့လမ်းဆုံရာ အဓိကလမ်းထောင့်၌ တည်ရှိခြင်း
* မြို့ပြ၏အလှကို ဖော်ပြသည့် ကမ္ဘာ့အဆင့်တန်းမှီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို The Central က စတင်
* ပုံစံကျနသော မိုးမျှော်တိုက်များ၊ ဈေးဝယ်ထွက်ရန် Shopping Mall များ ၊ အဆင့်မြင့် စီးပွားရေး ရုံးခန်းများပါသော
The Central သည် ခေတ်မီ ဆန်းသစ်မှု၏ အမှတ်သင်္ကေတ ဖြစ်လာမည်။
* Ground Floor Activity Deck
* Sky Lounge Entertainment Deck
* Sky Lounge Fitness Deck
* Sauna Facilities
* Restaurant, Bar and Cafe
* 1 Bedroom Suite
* 1+1 Bedroom Suite
* 2+1 Bedroom Suite
*3Bedroom Suite LUXURY SHOP
Retail Shop G/F & 1/F
No.7– 8, Kabar Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon
Ph : 09 777 773770
SPRING LINE စီမံကိန်းသည် မြန်မာပြည်ရန်ကုန်မြို့တွင်မြင်တွေ့ရမည့် SOHO ကုန်သွယ်ရေး ပွင့်လင်းသည့် လုပ်ငန်းရပ်ဖြစ်သည်။
24 ထပ်5ဆောင် ခေတ်ပေါ်စတိုင်အထပ်မြင့် အဆောက်အဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး စင်ကာပူ KTP ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီမှဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်။
လုပ်ငန်းတွင်း ရုံးခန်း၊ SOHO Condo၊ Shopping Center ခေတ်မှီသောအဆင့်မြင့်ဟိုတယ်၊ ရေကူးကန်၊ ပန်းခြံ၊ စားသောက်ဆိုင်စသည့်
တည်နေရာမှာ အောင်ဇေယျတံတားအရှေ့ဘက်ခြမ်း လှိုင်မြစ်နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိပြီး တမူထူးခြားသည့် မြစ်တစ်စင်း၏ ရှုခင်းရှိသဖြင့်
တည်ဆောက်ပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့စံပြအလှယ်ပိုင်းအချက်အချာကျအဆောက်အဦးမုချဖြစ်လာတော့မည်။
ထို့အပြင် SPRING LINE စီမံကိန်း၏မြေအမျိုးအစားသည် ရန်ကုန်တွင်အချိုးအစား ၁ရာခိုင်နှုန်းသာပါရှိသည့် Free Hold Land ဖြစ်သည်။
ရှားပါးသည့် ထာဝရပိုင်ဆိုင်ခွင့်မြေရာဖြစ်သောကြောင့် သားစဉ်မြေးဆက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်သောအခွင့်အရေး ဖြစ်ပါသည်။
Proart Construction & Decoration Co., Ltd.
Proart Construction & Decoration Co., Ltd
36B, အဝေရာလမ်း၊ ရန်ကင်း၊ ဘောက်ထော်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Contact : 095071403
Prime Home Decoration
” ဒီဆိုင်လေးထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ စိတ်ထဲလန်းလန်းသွားတယ် ”
” မင်းအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာလေးကစိတ်ကိုကြည်လင်စေတယ် ”
” အိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းအမောပြေသွားတာပဲ ”
ဒီလိုမှတ်ချက်ပေးသံတွေ ကို ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းမှုကိုပါပေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ဖို့ အမှန်တကယ်အရေးပါလှပါတယ်ခင်ဗျာ။ တန်ဖိုးကြီးအိမ်ဖြစ်စေတန်ဖိုးနည်းတိုက်ခန်းလေးဖြစ်စေဓနိသက်ကယ်မိုးထားတဲ့အိမ်လေးဖြစ်စေအပြင်အဆင်အထားအသိုဟာအလွန်အရေးပါလှပါတယ်။ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ် အလုပ်တွေမအားတဲ့ခေတ်ထဲမှာ
လူကြီးမင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဆောက်အဦးများတိုက်ခန်းများအားပိုမိုသပ်ရပ်တဲ့အပြင်အဆင်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးအချိန်ကုန်ခေါင်းရှုပ်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အပြင် ( One stop service ဖြစ်သဖြင့် တစ်နေရာတည်းမှာအပြည့်အစုံဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိူင် ) လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျအောင်အစအဆုံးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမည့် ကျွန်တော်တို့ Prime Home Decoration & Renovation အဖွဲ့ကအသင့်ရှိနေပါပြီ။
ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့တဲ့ Project များကိုလဲ ကျွန်တော်တို့ Prime Home Decoration and Renovation Page ထဲသို့ဝင်ရောက်လေ့လာနိူင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
ကျွန်တော်တို့ Group ကနေပြီး –
ဆောင်ရွက်ပေးမည့်အပြင်ပြုပြင်မွမ်းမံလိုသည့် အဆောက်အဦ/အခန်းသို့ လိုက်လံကြည့်ရှုတိုင်းတာပြီး
-PAE စနစ်ဖြင့် အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ခြင်း
-Design ဆွဲပေးခြင်း Estimate တွက်ချက်ပေးခြင်း
-Interior Decoration နှင့် Exterior Decoration များအားခေတ်မှီ Design ပုံစံများရေးဆွဲပေးခြင်းနှင့် ဖန်တီးအလှဆင်ပေးခြင်းတို့ကိုလူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကျဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
* လူကြီးမင်းတို့အသုံးပြုသည့် Budgetနှင့် ထိုက်တန်သည့်အရည်အသွေးရှိစေရန်အာမခံပါသည် ။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုသည်များရှိပါက( တိုက် ၂ အခန်း ၁ မြေညီထပ် တော်ဝင်မင်္ဂလာအိမ်ယာရှေ့ တာမွေ Ocean အနီး ၁၅၄ လမ်းတာမွေ ) သို့လာရောက်ဆွေးနွေးနိူင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
Ph – 09427561717 . 09971723651 သို့လဲဆက်သွယ်ဆွေးနွေးနိူင်ပါသည်။
‌Email – zwephan1990@gmail.com
NINA Construction & Decoration
No.345 Gyogone Street2(South) Insein, Yangon .
09 972 769990
Krittika Co., Ltd.
Krittika (ခရစ်တစ်ကာ) ရဲ့လက်​ရာအသစ်လေး​တွေပါ။
အပ်နှံသူတွေစိတ်ကြိုက် ပုံစံ၊ ဒီဇိုင်း၊ ကာလာ၊ ဘာညာ၊ အနေအထားအားလုံးအားလုံးကို
ဒီဇိုင်နာနဲ့သီးသန့်ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးမှ လုံးဝလုံးဝ Customized လုပ်ထားတာပါ။
ကိုယ့်အိမ်မှာထားမယ့်နေရာနဲ့ ကွက်တိအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် တိုင်းတာပြီးလုပ်ထားတာကြောင့် နေရာမပုပ်တော့ဘဲ
ပြောရရင်တော့ ဆိုင်ကနေလွယ်လွယ်ဝယ်လိုက်တဲ့ရယ်ဒီမိတ်အင်္ကျီနဲ့ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်နာဆီမှာကိုယ့်ကိုယ်တိုင်းနဲ့ချုပ်တဲ့အင်္ကျီ ကွာသလိုပေါ့။
အချိန်မစောင့်နိုင်သူတွေအတွက်လည်းမပူပါနဲ့။ Showroom မှာအသင့်လုပ်ပြီးသားလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံအရွယ်အစားနဲ့ကိုက်ညီရင်တော့ တခါတည်းဝယ်သွားလို့ရပါတယ်။
ဈေးနှုန်းကတော့ ဆိုင်တင်အလုံးတွေကနည်းနည်းသက်သာပြီး၊ အော်ဒါမှာတဲ့အလုံးတွေကတော့ နည်းနည်းလေးဈေးပိုပါလိမ့်မယ်။
ခုပြထားတဲ့ပုံ​လေး​တွေက​တော့ professional camera နဲ့ရိုက်​ထားတာမဟုတ်​​လို့ ကြည့်​ရတာသိပ်​မလှဘူးဖြစ်​​နေတယ်​။
Sales and Marketing အဖွဲ့က Reply ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အမှတ်​ ၄၅(B) ​အောင်​​ဇေယျလမ်း၊ ​ကျောက်​ကုန်း၊ရန်​ကင်း။
၀၉ ၇၇၃၃၀၀ ၇၅၀
မနက်​- ၉း၀၀ နာရီမှ ည​နေ ၅း၀၀နာရီ
Customer တွေအတွက် Design အခမဲ့ရေးဆွဲပေးပြီးဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ အိမ်အရောက်တပ်ဆင်ပေးနေတဲ့ အပြင် Design ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးယုံကြည်အပ်နှံလာတဲ့ မိတ်ဆွေများကိုစရံငွေကြို မယူဘဲလက်ရာသေသပ်ပြီးအချိန်မှီပြီးစီးအောင် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများပေးနေလို့ Brave Decoration ရဲ့
ဖုန်းနံပါတ် 📞📞📞09422451649 / 0949585773 ကိုအခုပဲဖုန်းခေါ်လိုက်ပါနော်
INDECO Art Interrior
ParamiRoad, Yangon .
09 797 009205
Creation Jay Interiors
Creation Jay Interiors ၏ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပြီးစီးသွားတဲ့ Latest Residential Project အား ပြင်ဆင်ပေးထားပုံလေးတွေပါ…
Customer စိတ်တိုင်းကျသည်အထိဆွေးနွေးအကြံပေးပြီးလိုချင်သည့်စိတ်ကူးပုံစံလေးအတိုင်းရရှိအောင် ကြိုးစားပေးထားပါတယ်…
Customer ၏ကျေနပ်နှစ်သက်မှုနှင့်အတူ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်…ယုံကြည်စွာအပ်နှံ အားပေးမှုအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
လူကြီးမင်းတို့၏ လူနေတိုက်ခန်းများ၊ ကွန်ဒို၊ လုံးချင်း၊ ဆိုင်ခန်းနှင့် ရုံးခန်းများအားလုံးကို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့် လက်ရာသေသပ်လှပဈေးနှုံးချိုသာစွာစိတ်တိုင်းကျ အလှဆင်ပေးနေပါတယ်…
ပွင့်လင်းရာသီ Promotion အစီအစဉ်တွေလဲရှိတာမို့အမြန်ဆုံးသာဆက်သွယ်လိုက်ပါ…
Creation Jay Interiors ရဲ့ Latest သတင်းတွေ၊ Promotion တွေကိုလက်မလွတ်ရအောင် Like & See First လုပ်ထားပေးနော်…
အသေးစိပ်သိရှိလိုပါက… အမှတ်(၂)၊ ဦးကျော်ဒွန်းဇံလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် (အနောက်တိုင်းဆေးရုံရှေ့)၊ ဖုန်း – ၀၉ ၄၅၁၁၈၈၃၇၈၊ ၀၉၉၆၃၇၄၅၂၄၂၊ ၀၉၉၆၃၇၆၂၀၅၂ သို့ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်…
” ခေတ်မီလှပဒီဇိုင်းကျကျ Creation Jay နှင့်ဆက်သွယ်ကြ “
We proudly would like to share photos of one of our completed residential projects at Kyimyindine Township.
We do specialize in Interior Design and Decoration services for all type of Residential and Commercial buildings.
For inquiry, please contact us at 09 451188378, 09 963745242 and 09 963762052. Alternatively, you may visit our showroom at No. (2), U Kyaw Dun Zan Street, KyimyindineTsp, (In Front of West General Hospital) Yangon, Myanmar.
B2-Home hot line: 09-4500 62719, 09-254 207 656 ပါ။